मनोरन्जन - Enepalese.com
गुल्मी ६ साउन । लोक तथा दोहोरी गायक बैकुण्ठ महतको तिज गीत “घाटाको कारोबार”को भिडियो गुल्मीमा छाँयाकन हुने भएको छ । गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासको वालमन्दीरमा शनिवार उक्त गीतको भिडियो छाँयाकन हुने भएको रचनाकार तथा गायक...
विदेशमा भए पनि कला र संस्कृतिको प्रबर्धन गर्न कुनै कसर छोडेको छैन : पुस्कर पन्त ,कलाकार तथा चलचित्र निर्माता
पछिल्लो दशक देखि कलाकारहरु विदेशिने क्रम झन् बढ्दो छ l अन्य कुनै पनि पेसाका मानिस बिदेसिञ्छ्न भने झ्याली पिटीदैन तर कलाकारहरु बिदेसिने भए भने संचार माध्यमको मुख्य पृष्ठ तथा महत्वपूर्ण समाचार बन्ने गर्छ l बिश्वका सबै...
तीजको अवसरमा २९ अगष्टमा अल्मेडामा विशेष कार्यक्रम
हिन्दु धर्मावलम्बी महिलाहरुको महान चाड हरितालिका तीजको अवसरमा २९ अगष्ट शनिबार, २०१५ मा विशेष कार्यक्रम हुने भएको छ । बिशेष कार्यक्रमका लागि संगीता गुरुङ (दक्षिण सनफ्रान्स्सिको)को संयोजकत्वमा आयोजक कमिटी समेत गठन गरिएको छ । कमिटीमा...
तीजको गीतमा २९ अगष्टमा नाच्ने होइन त ?
स्टेजमा गीत गाउँदा इन्दिरालाई टाइट कपडा किन चाहिन्छ ?
काठमाडौं । नेपाली गायन क्षेत्रमा ‘चौवन्दी चोली अनी रातो घाघर’ गीतबाट चर्चामा आएकी गायिका गायिका इन्दिरा जोशीको नयाँ कुरा खुलासा भएको छ । जून कुरा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रष्ट भएको छ । काठमाडौंमा आयोजना...
मिराको सिउँदो भरे शाहिदले
मुम्बई । बलिउडका ‘लभर’ हिरो शाहिद कपूरले विवाह गरेका छन् । मंगलबार उनले ४० जना जन्ति लिएर मंगेतर मीरा राजपूतसँग विहे गरेका हुन् । दिल्लीको बाहिरी इलाका छत्रपुरस्थित एक फार्महाउसमा शाहिदले विवाहको जग्यमा सात फेरि...
जितु नेपाल ,कोमल ओली ,बद्रि पंगेनी तथा अन्य कलाकारले अमेरिका घन्काउने
अमेरिकाको बिभिन्न शहरहरुमा नेपाली समुदाय ,नेपाली भाषी भुटानी समुदायलाई समेत लक्षित गर्दै नेपालका ख्याती प्राप्त बिबिध विधाका कलाकारहरुले अमेरिका घन्काउने भएका छन् l २०७२ तिज ,दशैं तथा तिहार धमाका नामाकरण गरिएको सांगीतिक यात्रामा नेपालका हास्य...
पछिल्लो समय चलचित्र, म्यूजिक भिडियो, डकुमेन्ट्री, सिरियललगायतको छायाङ्कन गर्न सबैको रोजाईमा पर्ने झापामा भर्खरै एउटा आधुनिक गीतको म्यूजिक भिडियो छायाङ्कन भएको छ । केही महिनाअघि बजारमा आएको नयाँ एल्वम अन्योलमा भएको स्वरुपराज आर्चायको आवाज, तेजेन्द्र...
दीपकराज गिरीको कृषिमन्त्रीलाई व्यङग्यः आगो छुनु, ‘आइमाइ’ नछुनु !
काठमाडौं । कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीको हर्कतप्रति चर्चित कलाकार दीपकराज गिरीले झटारो हानेका छन् । नेपाल टेलिभिजनको साप्ताहिक हास्य टेलिश्रृंखला तितो सत्यका कलाकार दीपकराजले विहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस पोष्ट गर्दै कृषिमन्त्री पराजुलीलाई ‘आगों छुनु,...
बलिउडमा हिरोइन नै वेश्या बनेपछि…
मुम्बई । पछिल्लो समय बलिउडका हिरोइन वेश्या बन्ने लहर नै छ । केही समय अघि मात्रै सलमान खानको चलचित्रमा काम गरेकी हिरोइन् होटलबाट वेश्यावृतिमा संलग्न भएको अवस्थामा रंगे हात पक्राउ परेकी थिईन् । त्यसको...
« अघिल्ला 1 … 84 85 86 87 88 … 95 पछिल्ला »